အေ၀းမွုာပညာသင္ေနရွာတဲ့ေျမးမေ လး၀င့္၀ါပန္းျမတ္သူရဲ႔ အသက္ (၁၇) နွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ေလးအတြက္ ေမြးေေန႔ ဆုမြန္ေကာင္းေလ းေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ – Cele Snap
အေ၀းမွုာပညာသင္ေနရွာတဲ့ေျမးမေ လး၀င့္၀ါပန္းျမတ္သူရဲ႔ အသက္ (၁၇) နွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ေလးအတြက္ ေမြးေေန႔ ဆုမြန္ေကာင္းေလ းေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊ
မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ အဖြူအမည်း ဖလင်ခေတ်က တည်းက လျှမ်းလျှမ်းတေ ာက်ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်ယေ ာက်လည်းဖြစ်သလို အမျိုးသမီးဒါရို က်တာတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
အကယ်ဒမီဆုများစွာကိုလည်း လက်ဝယ်ပို င်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝါဝါဝင်းရွှေက အခုဆိုရင် အသက်ခုနှစ်ဆ ယ်ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီး သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ် တွေအပေါ်ကိုတော့ သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင် သေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ သူမကိုယ် တိုင် အသွေးအသား ထဲက မြတ် နိုးတဲ့ အနုပညာအမွေတွေကို သားသမီးမြေးတွေရတဲ့အထိ လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားနိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ ကတော့ ဝါဝါ ဝင်းရွှေရဲ့ သား ဝင်းထွဋ်ဝင်းရဲ့ သမီးငယ်လေးဖြစ်သူ ဝင်းဝါပန်းမြတ်သူရဲ့ အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ မြေးမလေးအတွက် “သိပ်ချစ်ရတဲ့ မြေးလေး Pinky ပန်း သွေး HAPPY BIRTHDAY. HAPPY LONG LIFE . ဒီနှစ်မွေးနေ့ မှာ တော့ ဖွားတို့နဲ့ ဝေးတဲ့ Singapore နိုင်ငံမှာရောက်နေရှာပြီပေါ့။ ငယ်စဉ်အခါ ပညာရှာ။
ဆိုတဲ့အတိုင်း ၊မြေးလေးရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးပြည့်စုံပါစေ။ သွားလေရာ အန္တရယ်ကင်းလို့ ဘေးရှင်းပါစေ။ သူတော်ကောင်းများနဲ့သာ တွေ့စုံပါစေ။လို့ ဖွားဖွား မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးလို က်ပါတယ်နော်။” ဆိုပြီး အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုမွန်ကေ ာင်းတောင်းပေးလာခဲ့ ပါတယ်။ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့ မြေးမလေးနှစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝါရွှေနွယ်သွေးဝင်းနဲ့ ဝင်းဝါပန်းမြတ် သူတို့ကတော့ ဖွားဖွားကြီးရဲ့ အချောအလှတွေကို စုပြုံပြီးရရှိထားကြတာမို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူလေ းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်လေး Pinky လေးအတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေ းလိုက်ပါတယ်။
သမီးရည္းစာေတြလိုေနထုိင္ရတဲ့ PROGRAM ေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေစခဲ့တဲ့နာမည္ၾကီးလူငယ္ဆယ္လီစံုတြဲေလး(၂)တြဲ
ခင္ပြန္းနဲ႔သားသမီးေတြအေပၚအ နစ္နာခံျဖည့္ဆည္းေပးျပီးအိမ္ေထာင္ရွင္မပီသတဲ့ခ်စ္ ဇနီးေလးအတြက္ခ်စ္စကားေတြေနဲ ႔ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ခင္လႈိင္